Mapurisa Onetsa Mai Holland naMuzvare Thabitha Khumalo
Kurume 14, 2008
Vari kumirira MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai musarudzo dzeparamende muBulawayo East, Muzvare Thabitha Khumalo, vambochengetedzwa nemapurisa epaBulawayo Central Police Station, vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana dzinosanganisirawo yekubvisa maposter ebato reZanu PF.
Aka kava kechipiri Muzvare Khumalo vachisungwa nemapurisa nenyaya dzakafanana naidzodzi.
Muzvare Khumalo vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti iyi inzira yehurumende yeZanu PF yekuda kuvashungurudza kuitira kuti vasawana nguva yekutsvaga rutsigiro.
Ukuwo nhengo yebato iri, iyo iri kukwikwidza musarudzo dzaseneta anomirira Chizhanje muHarare, Amai Sekai Holland, vanoti vambonetswa nemapurisa apo vaenda kuHarare Police Central. Mai Holland vanga vachibvunzwa nenyaya yekuda kutsikwa kwavo nemotokari kwavakaitwa nevatsigiri veZanu PF kuEpworth.
Apo vanga vari kumapurisa, mamwe mapurisa atanga kunetsa Mai Holland achivati vakapa mapurisa kero yepavanogara isiri yechokwadi. Izvi zvinonzi zvakaitika apo vakarohwa gore rapera nemapurisa musi wa11 Kurume. Mai Holland vanoti mapurisa ari kuvapedzera nguva yavo nezvinhu zvisina basa, sezvo vachifanirwa kunge vari kuChizhanje vachitsvaga rutsigiro.